FIANTSOANA “ACTE ISOLÉS” : Namoahana “Filazana Fikarohana” i Marco Randrianisa
Namoahan’ny Ambasadaoron’i Madagasikara any Frantsa, “Filazana Fikarohana” ao Parisy sy Géneve i Marco Randrianisa noho ny Fiantsoana “acte isolés” sy ny fanaovana hazalambo ny fianakavian’ny Filoham-pirenena. 2 mars 2021
Mihevitra ny tenany ho ambonin’ny lalàna ary manao tsinontsinona ny Fanjakana Malagasy mihitsy ity mpikaraman’adin’ny mpanohitra monina any ivelany ity. Tamin’ny alahady 28 febroary 2021 lasa teo, tamin’ny 08 ora sy 44 minitra hariva, ora eto Madagasikara, nanao horonantsary niantso “acte isolés” tahaka izay efa nataon’ny RMDM ity lehilahy ity.
Nokarohiny ny trano fonenan’ny fianakavian’ny Filoham-pirenena mandranto fianarana any ivelany ary teo anoloan’io trano io no nanao horonantsary mihantsy sy manao tahaka ireny fomban’ny mpampihorohoro any amin’ny tany miady ireny i Marco Randrianisa. Fihetsika voararan’ny lalàna tanteraka izany ary sokajiana ho toy ny fampihorohoroana ataon’ny “mafia”. “Tsy manana choix intsony isika vahoaka Malagasy erak’i Madagasikara.
Tsy manana choix intsony isika : na isika miditra amin’ny grève générale erak’i Madagasikara, na isika miditra amina actes isolés avo lenta sy mahomby… Samia manao izay tandrifiny azy… Ho an’izay avanana amin’ny fivavahana dia mivavaha ; ho an’izay avanana amin’ny fanoratana dia manorata, alefaso ny fitoriana (?) ; ho an’izay manana ketrika mahomby amin’ny gidraka mahomby sy avo lenta dia arosoy”. Io no ampahany tamin’ny horonantsary nalefany.
Tsy olom-baovao eo amin’ny sehatra politika i Marco Randrianisa. Maro tsy tambo isaina ny dosie momba azy. Raha tsiahivina, mpikambana ao amin’ny Gtt Frantsa ny lehilahy ary isan’ireo voarohirohy tamin’ilay “attentat”, saika hanapoaka ny fiara nitondra ny Filohan’ny tetezamita tetsy “Marais Masay” ny taona 2011. Iny raharaha iny izay voalaza fa ity olona voatonona eto ity sy ny mpanao politika Mamy Rakotoarivelo, tanan-kavanan-dRavalomanana no niketrika azy (araka ny tatitra nataon’ny gazety Madagate tamin’ny 19 mey 2011).
Tsy izay ihany, efa nohelohin’ny Fitsarana Frantsay higadra 03 volana ihany koa i Marco Randrianisa. Inona àry izany no tena tanjony ? Mazava ho azy fa hijoro ho saribakolin’ny Frantsay izy sy ny mpanohitra handetika an’i Madagasikara sy hamerina an-dRavalomanana eo amin’ny Fitondrana. Horonantsary maro no efa naparitak’ity mpikaraman’ady ity ao amin’ny tambajotra fesiboky ao. Ny ankamaroan’ireo dia manindrahindra ny RMDM sy ny miara-manonja ary manaratsy ny Fitondrana mijoro amin’izao fotoana.